Nitombo indray ireo lisitry ny fitarainana naravon'ny Conamept ny 8 oktobre 2020 - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
Le projet 20by2020 pour améliorer la qualité de l'eau dans les communautés rurales de Madagascar. il y a 19 heures
Andro iraisam-pirenena hoan’ny mpampianatra
Nomena lanja ireo mpampianatra, sy ny asa fampianarana.
Ny 5 oktobra dia andro iraisampirenena ho an’ny mpampianatra araka ny namaritan’ny Unesco azy. Mandritra ny herinandro no hanamarihan’ny Conamept Coalition Nationale Malagasy pour l'Education Pour Tous izany. Isan’ny fanamarihana ny atrikasa natao ny 8 oktobra teo tao Antananarivo.
Isan-taona ny Conamept dia manamarika ny andron’ny 5 oktobra. Porofon’izany ity taona 2020 ity, na ao mbola ao anatin’ny hamehana ara-pahasalamana aza dia nanao hetsika ity vondrom-pikambanana ity entina hanomezana lanja ary fankaherezana ny mpampianatra.
Fitarainana 20 andalana
Ny taona 2016 dia nasehon’ny Conamept ilay kahie iray mirakitra ny fitarainan’ireo mpampianatra. Fitarainana nangonin’ireo sendika sy fikambanan’ireo mpampianatra sy mpanabe manerana an’i Madagasikara. Niaraha-namolavola tamin’ny Conamept io kahie io, fa ny hevitra kosa dia an’ireo mpampianatra, fa ny famoahana sy ny fanatanterahana no an’ny Conamept.
Efa tamin’ny taona 2016 no namoahana io kahie io. Efa maro ny mpitondra nifandimby teo anelan’izany fotoana izany. Mety misy ny miova amin’ireo fitarainana, misy ny mety miala ary eo ihany koa ireo mety ho ampiana. Nijery an’izay izy ireo ny alakamisy 8 oktobra 2020 ho fijerena ireo tokony hatsaraina ary koa nametraka ireo komity hikarakara ny fanatsarana ny kahie sy ny paikady entina entina hanapariahana izay paikady izay.
Isan’ny takian’ireo mpampianatra ao amin’ity boky ity araka ny nambaran’i Huguette Rakotoarivony, mpandrindra nasionaly, Coalition Nationale Malagasypour l'Education Pour Tous « ny fanamafisana ny fahaiza-manao, ny grille indiciaire, ny fijerena ny lafiny mahaolona manokana : tahaka ny hoe raha marary izy ireo sy ny sisa. Tsy azo atao ambanin-javatra koa ny hoenti-manana toy ny foto-drafitrasa sy fitaovana entina mampianatra mba hanatrarana ireo tanjona iandrasana amin’izy ireo. Indrindra ny tsy hanaovana ho fitaovana politika intsony ny asa fanabeazana ».
Tahaka ny mahazatra ny olana amin’itony atrikasa itony dia ny fanatanterahana izay hevitra tsara naposak’ireo mpandray anjara ary indrindra fa ireo tena voakasika no nandray anjara teto dia ireo mpampianatra izany. Ny conamept dia tsy rafitra mpanatanteraka fa mpanentana, mpandrisika ary vondrom-pikambanana misehatra manokana eo amin’ny tontolon’ny fanabeazana. Ho ren’ny mpitondra mpanatanteraka ve ny hetahetan’ireo mpanabe ireo ? Roapolo ny fitarainana ao anatin’ity kahie ity ka ny enina ambinifolo mbola tsy voavaly. Mahavelom-bolo izany raha to amaro no efa voavaly.
Tsiahivina anefa fa niampy ilay roapolo niaingana. Niampy fito tamin’ny 2017 ary tamin’ny atrikasa natao ny 2020 ity mbola nisy fitarainana telo vaovao.
Qualité de l’eau : Le projet 20by2020 pour améliorer la qualité de l'eau dans les communautés rurales de Madagascar. - il y a 19 heures